China Multi element high efficence efijery fanamboarana sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Fitaovana fahombiazan'ny singa marobe
Ny efijery avo lenta avo lenta dia taranaka vaovao misy vokatra haitao avo lenta izay novolavolain'i Xinxiang Chengxin hovitrovitra fitaovana Co., Ltd. Mety tsara amin'ny fizahana sinter sy akora. Ny takelaka sivana dia mandray takelaka sivana roa sosona miaraka amin'ny fahombiazan'ny fitiliana avo lenta ary ny fiatraikany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
1, fitiliana misaraka, masinin-tsarimihetsika amin'ny ankapobeny tsy misy hovitrovitra, horonan-tsarimihetsika
Ny efijery haingam-pandeha avo lenta an'ny singa marobe dia tsy mitovy amin'ny efijery fampihetsiketsehana nentim-paharazana satria tsy mandray anjara amin'ny vibration amin'ny ankapobeny. Ny takelaka, ny fonony ambony ary ny fototr'ilay masinin-tsarimihetsika dia ampahany voafaritra, izay tsy mandray anjara amin'ny vibration, ny écran écran ihany no mandray anjara amin'ny vibration.
2, firafitra mihidy
Ny efijery mahomby amin'ny singa marobe dia ampiharina amin'ny toe-javatra iasana miaraka amin'ny vovoka bebe kokoa, izay namboarina ho rafitra mihidy tanteraka, mba tsy hivoaka ny vovoka ary mahafeno ny fepetra takian'ny fiarovana ny tontolo iainana.
3, amplitude lehibe kokoa ary enta-mavesatra maivana kokoa
Noho ny toetra ara-teknikan'ny fikororohana ny efijery ary tsy misy fihoaran'ny vatan'ny efijery, ny fihenjanana mahery vaika amin'ny efijery mahomby marobe amin'ny singa marobe dia azo ahena farafahakeliny, noho izany dia azo ampitomboina be ny amplitude, fa ny enta-mavesatra mavitrika kosa dia azo ahena be.
4, Hery ambany
Noho ny habetsaky ny ampahany mihetsiketsika sy ny kalitaon'ny vibration kely, ny herin'ny efijery mahomby amin'ny singa marobe dia azo ahena hatramin'ny farany ambany. Raha ampitahaina amin'ny masinina fanaon-tsarimihetsika nentim-paharazana, ny herinaratra dia azo ahena mihoatra ny indroa.
5, Rafitra fanaraha-maso PLC tsy manam-paharoa
Ny efijery mahomby marobe amin'ny singa marobe dia entin'ny motera marobe, ary ny elanelam-potoana fanombohan'ny motera tsirairay dia 10-15 segondra. Manomboka amin'ny làlana mankany aloha izy io ary mijanona amin'ny làlana mankany aoriana, mba hahatratrarana ny tanjona manomboka sy miato ny fiara foana. Tsy misy fitaovana voatahiry eo amin'ny efijery ho mora jerena. PLC dia ampiasaina hifehezana ny fanombohana, fanakatonana, fifehezana ary fanaraha-maso lavitra ny fitaovana rehetra.
6 、 Fikojakojana
Izahay dia manao ny singa hovitrovitra amin'ny efijery haingam-pandeha avo lenta ho an'ny singa marobe, mba hahafahana manolo haingana ny iray manontolo, ny fikojakojana ny tany ary hahazoana fotoana hanaovana famokarana azo antoka.
7, Sarany fandidiana ambany
Ny efijery haingam-pandeha avo lenta misy singa marobe, ampahany kely ary hery ambany. Io no kely indrindra amin'ny sivana rehetra. Ny takelaka fanasivana dia ampahany marefo amin'ny efijery avo lenta, saingy ambany ny vidiny. Ny sarany ambany amin'ny vidin'ny efijery avo lenta dia tsy azo ampitahaina amin'ny masinina mahazatra.
8, tombony ara-teknika amin'ny efijery avo lenta avo lenta
Ny efijery mahomby amin'ny singa marobe dia karazana efijery mihetsiketsika, izay mampiasa ny fitsipiky ny mekanika ny vibration mba hahatanteraka ny fisavana. Ny mampiavaka azy ara-teknika dia: ny fizarana segondra, ny milina efijery iray manontolo dia tsy mihetsika, ny takelaka sivana dia mihetsiketsika ary manana amplitude miasa lehibe. Ny masinin-tsarimihetsika dia mikaroka ny faritra fitiliana lehibe indrindra, ny tahan'ny fanokafana lehibe indrindra, hahatratrarana ny fahombiazan'ny fizahana farany ambony.
Tsy misy olana amin'ny fitsaboana saribao mando sy miraikitra amin'ny efijery haingam-pandeha marobe, ary tsara kokoa ny vokatry ny fanodinana arina masira lehibe. Raha ampitahaina amin'ny efijery mahazatra, eo ambanin'io faritra io ihany, ny efijery mahomby amin'ny singa marobe dia manana hery ambany kokoa, tsy misy fanakanana, tsy misy fametahana, fahaiza-mandalo matanjaka, tahan'ny fanokafana avo kokoa, azo hatsaraina intelo farafahakeliny ny vokatra fitiliana, ary avo ny haavon'ny automatisation, ary hihena be ny habetsaky ny fikojakojana noho ny fihenan'ny teboka fikojakojana.
Masontsivana teknika (efijery tsara):
Modely ho an'ny fitaovana Mesh habe mm hafainganana maotera r / min Vovoka kw Mm amplitude avo roa heny Habe famahanana mm fahaiza-manao fanodinana t / h Halavany * halavany * haavony
CDYS-200 6-12 720 2 * 7.5 15-25 ≤50 200 4084 * 3230 * 2361
CDYS-300 6-12 720 3 * 7.5 15-25 ≤50 300 6500 * 3250 * 3600
CDYS-400 6-12 720 3 * 7.5 15-25 ≤50 400 6500 * 3500 * 3600
CDYS-500 6-12 720 3 * 7.5 15-25 ≤50 500 6500 * 3750 * 3600
CDYS-600 6-12 730 3 * 11 15-25 ≤50 600 6500 * 4250 * 3600
CDYS-800 6-12 730 4 * 11 15-25 ≤50 800 7642 * 4688 * 4400
CDYS-1000 6-12 730 5 * 11 15-25 ≤50 1000 8900 * 4810 * 5048
Masontsivana ara-teknika (efijery maditra)
CDYS-600 30-50 730 1 * 11 15-25 ≤300 600 2910 * 3464 * 2050
CDYS-800 30-50 730 1 * 11 15-25 ≤300 800 2910 * 3664 * 2050
CDYS-1000 30-50 730 2 * 11 15-25 ≤300 1000 4318 * 3664 * 3200
CDYS-1500 30-50 730 2 * 11 15-25 ≤300 1500 4318 * 3864 * 3200
CDYS-2000 30-50 730 3 * 11 15-25 ≤300 2000 5410 * 4085 * 4045
CDYS-2500 30-50 730 3 * 11 15-25 ≤300 2500 5410 * 4385 * 4050
Previous: Fandefasana tontolon'ny tontolo iainana
Manaraka: Sarimihetsika mihetsiketsika miovaova amin'ny akondro
Sarimihetsika matevina mitovy amin'ny elitika
Masinina fitiliana matevina mitovy amin'ny elitika
Pikantsary mihombo matevina mitovy
Sarina Vibrating matevina mitovy Linear
Screen Screen Vibrating
Sarin'ny Vibrating Mine
Sarimihetsika fihodinam-bokatra Rotary
Efijery mangovitra ultrasonic
Fandefasana tontolon'ny tontolo iainana
Efijery tontolo iainana elastika